News | म्यानु
News | Tag: म्यानु
एजेन्सी । गएराति भएको इएफएल कपमा म्यानचेस्टर युनाइटेडले इभर्टनलाई २-० गोलले पराजित गरेको छ ।
च्याम्पियन्स लिगः म्यानचेस्टर युनाइटेडविरुद्ध नेयमारको दुई गोल
एजेन्सी । गएराति भएको च्याम्पियन्स लिगमा म्यानचेस्टर युनाइटेड पिएसजीसँग ३-१ गोलले पराजित भएको छ ।
युभेन्ट्स नै फर्कन चाहन्छन् पोग्वा !
एजेन्सी । म्यानचेस्टर युनाइटेडका स्टार खेलाडी हुन् पोउल पोग्वा । उनले पछिल्लो समय म्यानुमा खासै प्रभावकारी खेल प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो मिडिया रिपोर्ट अनुसार उनी म्यानु छोड्ने मनस्थितिमा रहेका छन् ।
यी पाँच नयाँ खेलाडीले जोगाउँलान् त म्यानचेस्टर युनाइटेडको साख ?
एजेन्सी । यस सिजन म्यानचेस्टर युनाइटेडले प्रिमियर लिगमा खासै गतिलो खेल सुरुवात गर्न सकेको छैन । प्रिमियर लिगमा टोटनहमसँग लज्जास्पद हार भोगेपछि म्यानुले केही महत्वपुर्ण निर्णय लिदै खेलाडीहरु अनुबन्ध गरेको छ ।
काभानी नयाँ क्लबको खोजीमा
एजेन्सी । पुर्व पिएसजीका स्टार फरवार्ड इडिसन काभानी नयाँ क्लबको खोजीमा रहेका छन् । पिएसजीसँगको सम्झौता सकिएसँगै उनी हाल फ्रि एजेन्ट रहेका छन् । उनलाई म्यानचेस्टर युनाइटेड जाने खबर लगातार बाहिर आएको थियो ।